Fizahantany ho an'ny fitomboana any Karaiba amin'ny taona 2019
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahantany ho an'ny fitomboana any Karaiba amin'ny taona 2019
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Hospitality Industry • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
gettyimages 868106464 5b390498c9e77c001aad0491
Ny fikarohana farany, izay mamakafaka ny fahaizan'ny sidina manerantany, ny fikarohana sidina ary ny fifanakalozana famandrihana sidina mihoatra ny 17 tapitrisa isan'andro, dia nanambara fa ny fizahan-tany any Karaiba dia nitombo 4.4% tamin'ny taona 2019, izay saika nifanaraka tanteraka tamin'ny fitomboan'ny fizahantany manerantany. Ny famakafakana ireo tsena fiaviana manan-danja indrindra dia mampiseho fa ny fitomboan'ny mpitsidika dia notarihin'i Amerika Avaratra, niaraka tamin'ny dia avy tany Etazonia (izay misy 53% ny mpitsidika) niakatra 6.5%, ary ny dia avy tany Canada dia nahatratra 12.2%. Ny vaovao dia naseho tao amin'ny fivorian'ny Caribbean Hotel and Tourism Association Caribbean Pulse, natao tao amin'ny Baha Mar any Nassau Bahamas.
Ny toerana itobiana voalohany any Karaiba dia ny Repoblika Dominikanina, miaraka amin'ny mpitsidika 29%, arahin'i Jamaika, miaraka amin'i 12%, Kiobà misy 11% ary ny Bahamas misy 7%. Ny andiam-pahafatesana, izay natahorana ho mampiahiahy tamin'ny voalohany, tamin'ireo mpizahatany amerikana tany amin'ny Repoblika Dominikanina dia nitarika fihemorana vetivety tamin'ny famandrihana avy any Etazonia; na izany aza, satria tsy te-hiala amin'ny fialan-tsasatra any am-paradisa ny Amerikanina, dia nahazo tombony ny toeran-kafa, toa an'i Jamaika sy Bahamas. Nahita fitomboana matanjaka i Puerto Rico, tafakatra 26.4%, saingy io dia hita tsara kokoa ho fanarenana taorian'ny nandravan'ilay rivodoza Maria ny toerana natao tamin'ny septambra 2017.
Raha ny fandehanana tany amin'ny Repoblika Dominikanina avy any Etazonia dia nilatsaka 21%, ny isan'ny mpitsidika avy any Eropa Continental, ary ny toeran-kafa kosa dia nivonto mba hipetraka amin'ireo trano honenana. Ny mpitsidika avy any Italia dia nitombo 30.3%, avy tany Frantsa dia nisondrotra 20.9% ary avy any Espana dia nitombo 9.5%.
Ny fahasimbana nateraky ny rivo-doza Dorian dia nanimba ny sehatry ny fizahantany ihany koa satria ny famandrihana avy amin'ny tsena efatra amin'ny fito voalohany dia nianjera be nandritra ny volana aogositra ary nitohy nihena tamin'ny volana oktobra sy novambra. Na izany aza, ny volana desambra dia nahita fanarenana lehibe.
Manantena ny ampahefa-potoana voalohan'ny taona 2020, sarotra ny fomba fijery, satria 3.6% ny famandrihana ho an'ny vanim-potoana ankehitriny izay nisy azy ireo tamin'ny fotoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Amin'ireo tsena loharano dimy manan-danja indrindra, ny USA, izay be mpanapaka indrindra, dia ao ambadiky ny 7.2%. Fampaherezana, ny famandrihana avy any Frantsa sy Kanada dia 1.9% ankehitriny ary 8.9% mialoha; na izany aza, ny famandrihana avy any Angletera sy Arzantina dia ao ambadiky ny 10.9% sy 5.8%.
Raha ny filazan'ny World Travel & Tourism Council (WTTC), ny dia & fizahan-tany any Karaiba dia tompon'andraikitra amin'ny 20% mahery amin'ny fanondranana azy ary 13.5% amin'ny asa.
Frank J. Comito, tale jeneralin'ny tale jeneralin'ny Caribbean Hotel and Association Association, dia namintina hoe: "Amin'ny maha-faritra itodiana antsika, ny iray amin'ireo zavatra ilaina indrindra azontsika atao dia ny famporisihana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena mba hananana faharetana amin'ny fahatairana eo amin'ny tsena. Mazava ho azy, arakaraka ny ahatakarantsika tsara kokoa ny tsena no hametrahana ny toerany tsara kokoa hanaovana izany. Ny fahazoana mampiasa karazana data avo lenta nozarainay androany dia tena hanatsara ny fahatakarana ny tsena, ny drafitra ary ny fandraisana fanapahan-kevitra. ”